Ukuchonga ukuba ngaba ukuPakisha okuThuthwayo okuSebenzayo kulungele iNkampani yakho NGURICK LEBLANC
Eli linqaku lesithathu nelokugqibela kuthotho oluneenxalenye ezintathu. Inqaku lokuqala lichaze ukuphinda kuhanjiswe kwezothutho kunye nendima yalo kumxokelelwano wokubonelela, inqaku lesibini lachaza izibonelelo zoqoqosho nezokusingqongileyo zothengiso olunokuphinda lusebenze ...
IziBonelelo zezoQoqosho neNdalo esingqongileyo yokuPakisha okuThuthwayo okuSebenzayo NGU RICK LEBLANC
Eli linqaku lesibini kuthotho oluneenxalenye ezintathu nguJerry Welcome, owayesakuba ngumongameli woMbutho weePakeji ezinokuphinda zisetyenziswe. Inqaku lokuqala lichaze ukuphinda kuhanjiswe kwezothutho kunye nendima yayo kukuthengisela. Inqaku lesibini lixoxa ngezoqoqosho nakwimeko ...
Ukuchaza ukuPakisha okuThuthwayo kweZothutho kunye nokusetyenziswa kwaso NGURICK LEBLANC
Eli linqaku lokuqala kuthotho oluneenxalenye ezintathu nguJerry Wamkelekile, owayesakuba ngumongameli woMbutho wokuPakisha onokuthi uphinde usebenze. Inqaku lokuqala lichaza ukuphinda kuhanjiswe kwezothutho kunye nenxaxheba kwindima yokubonelela. Inqaku lesibini liza kuxoxa ngoqoqosho kunye nomona ...
Kutheni itawuli elahlwayo yomqhaphu iyimfuneko?
Iitawuli zobuso ezilahlwayo ziimveliso zokucoca ezilahlwayo, ezenziwe ngefayibha yomqhaphu, ukuthamba okuthambileyo, ubulukhuni, kunye ne -int-free. Indlela yokusetyenziswa yahlukile, njengokuhlamba ubuso, ukosula ubuso, ukususa izithambiso, ukukhuhla, njl.njl. Ezilahlwayo ubuso tow ...
Yintoni iimpawu ezizodwa zamaqweqwe evili enziwe ngebhodi yamaselula?
Thina baseLonova sinemigca emibini yemveliso yokukhupha inyosi. Ubungakanani bemihla ngemihla bunokufikelela kwiitoni ezili-16-17. Kwaye izizathu zokuba sikhethe iphaneli yobusi be-pp endaweni yelinye ikhadi okanye iiphaneli ezingenanto yile nto ikumgangatho ophakamileyo kunye nokwenza ...
Kutheni le nto umenzi weemoto ezininzi ekhetha ibhokisi yebhodi yeselula?
Kutheni le nto umenzi weemoto ezininzi ekhetha ibhokisi yebhodi yeselula? Iibhokisi zeplastiki zeplastiki luhlobo lwebhokisi eyenziwe ngemikhono yeselula, isiciko esitofelweyo kunye nepallet. Iibhokisi zazenziwe ngomthi ekuqaleni. Kwaye ngakumbi nangakumbi mveliso ukuvelisa pl ...